बिर्सन नसकिने ती तीन पुरुष - कथा - नारी
जीवनका तीन पुरुष, जसलाई म चाहेर पनि बिर्सन सक्दिन । बिर्सन चाहन्न पनि । एउटी सामान्य महिलालाई चारतारे होटलसम्म पहुँच बनाइदिने ती पुरुष मेरो जीवनका त्यस्ता विषालु काँडा हुन् जसका सम्झनाहरू अझै पनि खिल बनेर घोचिरहन्छन् ।
म एक मध्यमवर्गीय परिवारमा जन्मिएकी शिक्षित बाबुआमाकी छोरी । हामी ३ जना छोरी छांै । छोरा नपाएको आरोपमा बुवाले कान्छी ल्याएर मेरी आमालाई हेला गर्न थाले । सधैजसो रक्सीले मातेर आउने बुवाले वर्षौं आमालाई कुटपिट गरेपछि उहाँ माइतीको आश्रयमा जान बाध्य हुनुभयो । म ३ वर्षकी हुँदा बुवा र आमा छुट्टिनुभयो ।
मेरी आमाले सानोतिनो जागिर गरेर हामी ३ दिदी–बहिनीलाई हुर्काउनुभयो । आमा हामी ३ जना छोरीलाई सँगै लिएर सुत्नुहुन्थ्यो तर मध्यरातमा उहाँको चित्कारले हामी बिउँझन्थ्यौं । भक्कानो छोड्दै आमा रुँदा हामी उहाँको अनुहार हेरेर आँसु बगाउने सिवाय केही गर्न सक्दैनथ्यौं । पीडा र रोदनबीच मेरो बाल्यकाल बित्दै गयो । मलाई बुवाको अभाव सधै खड्किन्थ्यो ।
म कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिएँ । गाउँकै एक धनाढ्य परिवारको छोरो राजनसँग मेरो मित्रता बढ्न थाल्यो । ऊ र म एउटै कक्षामा पढ्थ्यौं । सँगै पढ्ने, सँगै खेल्ने अनि सँगै बसेर आफ्नो बाल्यकालदेखिको पीडा बिसाउने । ऊ मलाई तिमी सानै भए पनि बूढाबूढीका जस्ता कुरा गछर््यौ भन्थ्यो । हामी उमेरमा सानै भए पनि भविष्यका ठूल्ठूला सपनाका कुरा गथ्र्यौं । हामीले आफ्नो खुट्टामा उभिएर विवाह गर्ने योजनासमेत बनाएका थियौं ।
हाम्री छोरी जन्मिई । छोरी हुर्काउने क्रममा म छोरीसँग अलि बढी व्यस्त हुन थालें तर मैले उनलाई गर्ने प्रेम र सद्भाव अनि समर्पणमा कुनै कमी आएन । एकदिन अचानक मलाई काम विशेषले बाहिर निस्कनुपर्‍यो । म बाहिर गएर साँझ घर फर्किएँ । झ्यालढोका पूरै बन्द, ओहो आज उहाँ कति छिटो घर फर्कनुभएछ भन्दै ढोका ढकढक्याएँ तर ढोका खुलेन । सायद निदाउनुभएछ । घरको पछाडिबाट टकटक गर्नुपर्‍यो भन्दै पछाडि गएर पर्दाबाट चिहाएँ । म एक्कासि भुइँमा ढलें । कतिबेला कुन सुरमा कसरी कोठामा पुगें सम्झना छैन । मेरा श्रीमान्लाई मैले अर्कै कुनै केटीसँग देखें । जीवनमा दोस्रो पटक म फेरि मायामा हारें । मेरो पवित्र मायालाई कमजोरी मान्नेहरूले ममाथि विजय प्राप्त गर्दै गए । हो म विद्रोह गर्न सक्थें तर त्यतिबेला काखमा सानी छोरी थिइन् । छोरीमाथि पर्न सक्ने असरले गर्दा म सम्झौता गर्न विवश भएँ । मैले आफ्ना श्रीमान्लाई एकपटक मौका दिएँ किनभने मेराअगाडि सन्तानका लागि सम्मmौता गर्नुको विकल्प पनि थिएन । हरेक रात जब उनी मसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्न खोज्थे । खुट्टाको पाइतलादेखि शरीरले छाड्दै गएको अनुभव गर्थें म । म मर्थें त्यो पलमा तर विद्रोह गर्दिनथें । छोरी हुर्कदै थिइन् । मेरा श्रीमान् छोरी ३ वर्षकी हुँदा विदेश जान तम्सिए मैले उनलाई रोक्न चाहिन किनभने उनीप्रतिको मेरो माया, त्याग अनि समर्पण शून्यमा झरिसकेको थियो । छोरीका लागि बाबु अनि आमा दुवै म थिएँ । बिदेसिएका श्रीमान्ले पनि हामीलाई कहिल्यै फर्केर हेरेनन् ।
हो मैले त्यस्तै पुरुष फेला पारें । सामाजिक संजालमा फेला परेका ती पुरुषले पहिलो भेटमै आफ्नो पीडा साट्दा मैले जीवनमा आफूले खोजेजस्तै मान्छे भेटेको अनुभव गरें । हामी दिनहुँजसो सँगै कफी पिउँथ्यौं, सुख–दु:ख साटासाट गथ्र्यांै । ऊ सधै श्रीमतीले उसलाई होच्याउने–दबाउने दुुखेसो पोख्थ्यो । ऊ भन्थ्यो–म गाउँको केटा ऊ सहरमा हुर्के–बढेकी । सहरी मानसिकता र गाउँले जीवन कहिल्यै मेल खाएन सम्भवत: त्यसैले समयले मलाई तिमीसम्म पुर्‍यायो । ऊ थोरै बोल्थ्यो तर उसको बोलीमा व्यक्त हुने पीडा म आत्मसात् गर्न सक्थें । म कहिलेकाहीँ डराउँथे, तर्सन्थें, मेरो जीवनमा पूर्णविराम लागिसकेका दुई पुरुषजस्तै कतै तिमीले पनि मलाई प्रयोग मात्र त गरिरहेका छैनौ ? कतै श्रीमतीका नकारात्मक कुरा गरेर तिमीले मलाई फसाउने चारो फ्याँक्ने काम त गरेका होइनौ ? आँखाभरि आँसु पारेर बोल्दा ऊ मेरो आँसु पुछ्दै भन्थ्यो–तिम्रो कसम, मैले तिमीलाई कुनै कुरामा झूटो बोलेको छैन । ऊ भन्थ्यो–‘मेरी श्रीमतीसँग मेरो कहिल्यै दोहोरो संवाद हुँदैन । घर पस्दा यस्तो लाग्छ मानौं कुनै अपरिचित घरमा पस्दैछु । मेरो सारा सम्पत्ति उसको नाममा छ तर उसको मनमा मेरो नाम छैन ।’ त्यसो भन्दा मेरो मन भक्कानिन्थ्यो । लाग्थ्यो उसलाई सधैका लागि कतै टाढा लिएर जाऊँ जहाँ हामी दुईबीचको प्रेमलाई जीवन्त पार्न सकियोस् ।
जीवनमा आफूभन्दा बढी विश्वास गरेका यी तीन पुरुषको संगतबाट मैले एउटा कुरा बुझें–‘पुरुषको प्रेम आत्मासँग होइन शरीरसँग हुँदो रहेछ ।’